शिक्षा मन्त्रीज्यू, तपाईले छुट्याएको बजेटले हामी पुग्न खोजेको कहाँ हो ? - Himalaya Post
शिक्षा मन्त्रीज्यू, तपाईले छुट्याएको बजेटले हामी पुग्न खोजेको कहाँ हो ?
Posted by Himalaya Post | ३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार १५:२९ |
२०६४ सालमा एक कक्षामा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए । अहिले २०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिँदैगर्दा २ लाख ९० हजारमात्रै बाँकी रहे । १० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराए । विद्यालयमा नटिक्नेहरु कसका छोराछोरी हुन ? तपाईँ हाम्रो पक्कै होइनन् ।
जो विद्यालयमा टिकेका छन्, उनीहरुले कति सिकेका छन् भनेर हेर्यौं भने सरकारभन्छ, कुनैपनि विद्यार्थीले कुनैपनि विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिकेन । अझ अंग्रेजी, विज्ञान र गयित विषय हेर्योँ भने त्योभन्दा धेरै तल छ । यो नसिक्ने विद्यार्थी कसका छन् ? तपाई हाम्रा पक्कै होइनन् ।
देशमा ३६ हजारभन्दा बढी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरु छन् । योग्य शिक्षकले पढाउनुपर्ने ठाउँमा ८ कक्षा पढेकाहरुबाट ६ हजार रुपैयाँ तलबमा यी विद्यालयमामा पढाइन्छ । यी विद्यालयमा पढ्ने नानीहरु कसका छोराछोरी हुन् ? तपाईं हाम्रा पक्कै होइनन् । तर, हामीले लेखेको संविधानले यस्तो गर्न पाईँदैन भनेर भन्छ । हामीले लेखेको कुरा के छ, त्यो हामी गरिरहेका छैनौँ । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हामी सबैले लिनुपर्छ । कांग्रेसले, हिजोको एमालेले, हिजोको माओवादीले हामी सबैले लिनुपर्छ । यसलाई बदल्ने काम पनि हामीले नै गर्नुपर्छ । तर, जे गरिरहेका छौँ, त्यो गरेर अवस्था बद्लिन्न ।
सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुध्रिएन भनेर हामीले आरोप लगाउने कुरा एउटै छ । त्यो हो निजी विद्यालय । दाग अनुहारमा छ, ऐना पुछ्ने काम गर्छौं । हामी आफैले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा न प्रधानाध्यापक, न हामी सांसद न त शिक्षक, हामी कोही पनि त्यहाँ आफ्ना बच्चाबच्ची पढाउन तयार छैनौँ । किन यस्तो भयो भनेर अध्ययन गरिएको छ । भर्खरै माननीय शिक्षामन्त्रीले एउटा अध्ययन गर्नुभएको छ । तर, अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले लिएर गइसकेपछि आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयले फिर्ता माग्ने आँट गर्न सकेको छैन ।
आधारभूत विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारहरु बाँडफाँट गरेका छौँ । स्थानीय सरकारको अधिकार एकपछि अर्को खोसिँदै गएको छ । पाठ्यक्रमको विषय छ । महासंघले शिक्षकका बारेमा विस्तृतमा बताएको छ, सर्लाहीमा ७३ जना विद्यार्थीलाई एकजना शिक्षक हुँदैगर्दा भक्तपुरमा १७ जना विद्यार्थीका लागि एकजना शिक्षक छ । २९ हजार विद्यालयमध्ये २० हजार विद्यालयमा पूर्वाधारको बिजोग छ । गुणस्तर भनेको केबल अंग्रेजी भाषा हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । यस्तोमा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको बजेट हामीले हेर्यौं भने आधारभूत विद्यालयमा जति बजेट छुट्याइएको छ, म माननीय शिक्षा मन्त्रीलाई चुनौतिका साथ भन्न चाहन्छु, अर्को वर्ष भेटौं, यो पैसाले एक चौथाई विद्यार्थीलाईमात्रै पुर्याउनुभएछ भनेमात्रै पनि त्यो बेलामा शिक्षामन्त्रीले भनेको कुरा जे पनि हामी मान्न तयार छौँ ।
४ सय विद्यालयलाई एकमुस्ट अनुदान दिने भनेको गएको दुई वर्षमा एकरुपैयाँ पनि खर्च भएन । यो वर्ष के गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अवधारणा छ । त्यो अवधारण सार्वजनिक गरिदिनुहोस् । ५ अर्ब छुट्याउनु भएको छ । खेलकुद शिक्षकसम्म राख्छु भन्नुभएको छ । एटा विद्यालयको भागमा जम्मा १ लाख ३२ हजार पर्छ । दलित, अपांग भएको विद्यार्थीको भागमा प्रतिमहिना जम्मा ८५ रुपैयाँ पर्छ । एक दिनको खाजा भत्ता कति लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यू ? हाम्रो बच्चालाई तपाईले छुट्याउनुभएको पैसा दिनको जम्मा ११ रुपैयाँ पाउँदैछन् । ६३ हजार शिक्षक छैनन् । यत्रो शिक्षक राख्नुपर्ने बेलामा अवधारणामै नभएको स्वयम्सेवक शिक्षक भनेर ५ अर्ब छुट्याउनु भएको छ । यो बजेटबाट हामीले पुग्न खोजेको कहाँ हो ?
संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा हामी फेरि छाता ऐन भन्दैछौँ । दशौँ योजनादेखि हो छाता ऐन भन्न थालेको । के हो छाता ऐन ? अनि छाता ऐन ल्याउने हो भने नयाँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव किन ल्याएको ? के नयाँ विश्वविद्यालयको अध्ययन भएको छ ? डीपीआर तयार भएको छ ? यत्रो पैसा एक वर्ष खर्च गर्नसक्नुहुन्छ ? विश्वविद्यालयको नामको विषयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, यस्तो अवस्था किन बनाउँदैछौँ ?
विश्वविद्यालयको बारेमा यतिधेरै अध्ययन भइसकेपछि पनि यी कुनैपनि कुराहरु सुधार गर्न हामी किन तयार भएका छैनौँ ? यतिमात्रै होइन, अन्य कार्यक्रमहरु हामीले हेर्यौं भनेपनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा यतिधेरै कुराहरु गर्ने भनेका छौँ । तर, यी कुनैपनि विषयमा खर्चभएको बजेटले कहिँपनि पुर्याउँदैन । त्यसैले मैँले यही कुरालाई राखेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको छु ।
(खर्च कटौतीको प्रस्ताव र विनियोजन विधेयकमाछिको छलफलमा भाग लिनेक्रममा बिहीबार थापाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेको धारणा)
Previousलोकसेवा विज्ञापन विभेदकारी भएको भन्दै रद्द गर्न माग
Nextविप्लव नेकपाका जुम्ला इञ्चार्ज पक्राउ
को हुन् पक्राउ परेका गुण्डा नाइके राधे ?
२३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:३१
तीन दिनसम्म मौसम बदली र वर्षाको सम्भावना
१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार १०:१६
अन्तरिक्षमा नेपालको प्रवेश : स्याटालाईट प्रक्षेपणपछि कसले के भने ?
५ बैशाख २०७६, बिहीबार ११:२३
‘आँखा खोल्दा जताततै विकास र समृद्धि देखिन्छ’
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १६:१०